China Flat kuputira reza waya 15m pamupumburu 10 m pamupumburu vagadziri uye vanotengesa | Xinpan
Flat kuputira reza waya
Flat Kuputira Razor Wire
Flat inoputira reza iko kuchinjika kweyechimbi reza chengetedzo, inochinjiswa kuti ishandiswe mune yakazara vanhu mamiriro. Flat chengetedzo chipingamupinyi concertina senge yekudzivirira chengetedzo chipingamupinyi, zvakare chakagadzirwa chakasimbiswa chakakomberedzwa tepi concertina. Flat razor barrier chengetedzo yakasiyana nereza razor concertina iyo mairi ari mune imwe ndege, izvo zvinoita kuti dhizaini iwedzere kuumbana. Uye mairi coils ari padhuze akasunganidzwa pamwe nesadza kubva kwakakurudzira simbi. Kupa yakadzivirirwa zvivakwa, yakapfava chengetedzo chipingamupinyi chisvo chinonyanya kuumbika kushandisa uye chisina hukasha, izvo zvinopa mukushandiswa kwayo kwakawanda kana zvinhu zvakasiyana siyana munzvimbo dzemaguta.
Flat razor waya yakagadzirirwa kuchengetedza zvivakwa mumadhorobha uye kana iwe usingakwanise kushandisa yekumonera reza chengetedzo chipingamupinyi nekuda kwehukuru hwayo. Flat razor mesh chipingamupinyi chengetedzo inogona kuiswa pamhando dzese dzedziviriro uye chipingamupinyi, pamusoro pezvo, fenzi inogona kuvakwa netambo dzinoverengeka dzakapetana dzematepi akavezwa.
Flat razor mesh chengetedzo chipingamupinyi chakanyanya mari kupfuura concertina reza chengetedzo chipingamupinyi, nekuti kugadzirwa kwayo kunoda zvakanyanyisa kushoma concertina waya, saka mune izvo zviitiko apo pasina zvakakosha zvekuchengetedzwa kwekuvhara chinhu, iro rakapinza reza chipingamupinyi chengetedzo inogona kunge iri sarudzo yakanaka.
Kuvhiringidzwa kwerazha rakaputirwa rakaputira makoiri ekuvharira zvivakwa kwakanyanya kwazvo, kunyangwe rakadzikira pane iro rekonisina razino coils. Razor waya yakapetwa yakaputira makoji anokwanisa kuchengetedza zvivakwa zvavo mushure mebharaki uye kunyangwe zvidyiwa zvishoma munzvimbo dzakasiyana. Chinhu chakakosha cheiyo flat concertina waya ndechekuti, seyakagadzika chivakwa, haipfuure zviyero zveiyo fenzi, ine chitarisiko chisina hukasha, izvo zvinonyanya kudikanwa kugadzira zvipingamupinyi munzvimbo dzeveruzhinji.
Zvinoumba sandara reza waya:
Hapana chimiro chepamusoro chinenge chisinga kukuvadze vasina mhaka.
Chitarisiko chisina kuchena.
Optimum sarudzo yenzvimbo shoma uko inodawo kuchengetedzwa kwakanyanya.
Inowanikwa sefenzi yakamira yemahara.
Kuisa kuri nyore.
Saizi dzakaenzana dzinopihwa (inoratidzwa mune tafura) uye saizi tsika pane yakasarudzika odhiyo.
Rondedzero ye Flat Kuputira Razor Wire
Kureba Kureba Spiral Spacing Makoiri paBundle
Flat kuputira makoji anozovandudza zvakanyanya kushanda kweiyo fenzi. Akaiswa pane izvi, vanhu vasina mhaka vanodzivirirwa kubva mukukuvadzwa neyakajeka waya mesh fenzi apo vangango pinda vanozotya kudzoka.
Iwo akatsetseka ma coils anopa akachena asi anoshanda chipingamupinyi kana achishandiswa pamwe chete ne mesh fenzi.
Flat kuputira coil yekumisikidza iri nyore nyore kana ichinge yakagadzirirwa nekuvhara iyo mesh yefenzi.
Inopa chipingamupinyi chakakwirira kana chakakwidzwa kumadziro.
Kuiswa kweFlat Profile Razor waya iri nyore. Inogona kutsigirwa nekutema kana tambo inosungira kumusoro kwechikamu kumusoro kana neimwe nzira, nekukomberedza mabhureki kune aripo mafosheni mbiru uyezve kumhanyisa tambo yerutsigiro waya kuburikidza neburi repamusoro rebhureki uye waya ichisunga Razor waya kwairi.
Chero nzira yatinogona kukupa iwe neyakakodzera yakatwasuka kusimudza, kumesa waya uye bhaudhi kuti ikwanise iwe pachako kukwana kune fenzi kana madziro.
Pashure: Welded reza waya pajira riya Diamond reza pajira riya fenzi
Zvadaro: Waya pajira riya fenzi welded pajira riya fenzi bindu fenzi
Bto-22 Razor waya
Tenga Razor Wire
Mhando dzeRazor Wire